व्यवसाय को लागी ब्लगिंग | Martech Zone
व्यवसाय को लागी ब्लगिंग
मंगलवार, फेब्रुअरी 9, 2010 आइतबार, अक्टोबर 19, 2014 Douglas Karr
यदि तपाईं हुनुहुन्नथ्यो भने वेबट्रेंड्स सन् २०१० सम्मेलन, तपाईंले अविश्वसनीय व्यापार खुफिया सम्मेलन छुटाउनुभयो। संलग्नता कुनै पनि अन्य कम्पनी कन्फरेन्स जस्तो छैन जुन मैले गरेको छु। उद्देश्य भनेको ग्राहकलाई र उद्योग पेशेवरहरूलाई अनलाइन उद्योग भरिका सबै भन्दा राम्रो र सबैभन्दा उज्यालो विशेषज्ञहरूको प्रदर्शनको साथ प्रदान गर्नु हो। अर्को वर्षको लागि दर्ता गर्नुहोस् स्यान फ्रांसिस्कोमा संलग्न - तिनीहरू सँधै बेच्छन्!
यस बर्ष मलाई स्प्रिन्ट गर्न आमन्त्रित गरिएको थियो, १० मिनेट पावरपोइन्ट अनलाईन मार्केटिंग सम्बन्धित केहिको बारेमा र म उत्साहित छु। मैले मेरो काम गर्ने निर्णय गरें इनबाउन्ड मार्केटिङ (यदि तपाइँ प्रस्तुतीकरण देख्नुहुन्न भने क्लिक गर्नुहोस्)। न्यु अर्लिन्समा, मैले व्यवसाय मार्फत व्यवसाय मार्केटिंगको बारेमा विशेष कुरा भनें, तर उत्तम अभ्यासहरू उपभोक्ता मार्केटि toमा पनि लागू हुन्छ।
सक्कली प्रस्तुति अलि फरक थियो किनकि यो एनिमेटेड र सुन्दरताका साथ मेरो पछाडि foot० फिट स्क्रिनमा फैलिएको थियो ... तर यहाँ यसको मासु छ!
अवश्य पनि, यदि तपाईं न्यू अर्लिन्समा हुनुहुन्थ्यो भने तपाईंले वास्तविक उपचार पाउनुभयो ... मैले मेरो भाषण गरें र सोशल मिडियालाई नाचको विकाससँग तुलना गरें। मैले केहि चरणहरुमा फाल्यो र केहि हाँस्न सकें। यो चारै तिर एक महान समय थियो!
यहाँ स्लाइड को सामग्री को एक rundown छ:
इनबाउन्ड मार्केटिंग रणनीतिहरू
सामग्री बाध्यकारी भनेको रूपान्तरण उत्पन्न गर्दछ। उत्कृष्ट सामग्री भनेको प्रभावी कुञ्जी शव्द प्रयोग र सामग्रीको संयोजन हो जुन आगन्तुकहरूको प्रश्नको उत्तर दिन्छ? र तिनीहरूलाई बिक्री प्रक्रियाको अर्को चरणमा प्रोत्साहित गर्दछ। तपाईको ब्लग खोजी ईन्जिनको लागि अनुकूलित छ।
एक दिन पछि, बिक्री र मार्केटिंग संभावनाहरूको लागि जानकारीको स्रोत थिए। संभावनाहरू तिनीहरूमा निर्भर थिए।
अब खोजी ईन्जिनहरूले प्राय: ती सूचनाहरू प्रस्ताव गर्दछ जुन संभावनाहरूले खोजीरहेका छन्।
सोशल मिडियाले दुबै खोजीलाई प्रभाव पार्छ र निर्णय मेकरलाई प्रभाव पार्छ। सम्भावितले अब खोजी ईन्जिनहरू र उनीहरूको सामाजिक नेटवर्कबाट जानकारी प्राप्त गर्दैछ।
यदि तपाईंको बिक्री र मार्केटि teams टोलीहरू संभावनाको निर्णयमा संलग्न हुन चाहन्छन् भने, तिनीहरू खोजीमा अग्रसर हुनुपर्दछ र सामाजिक नेटवर्कमा संलग्न हुनु आवश्यक छ। अब कुनै कम्पनीले केवल उनीहरूको लागि आउने सम्भावनाहरू पर्ख्न सक्दैन?
तपाईं जताततै हुनु आवश्यक छ!
सिंडिकेशन र अन्य एकीकरण उपकरणहरूको उपयोगले तपाईंको समय बचत गर्न सक्दछ र तपाईंलाई अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा राख्न सक्दछ!
थप रूपमा, त्यहाँ मार्केटमा अन्य उपकरणहरू छन् तपाईंको एकीकरण आवश्यकताहरू सरलीकृत गर्न।
प्रत्येक एकल ब्लग पोष्ट सगाईको लागि मार्ग हुनुपर्दछ। सामान्यतया, यो कार्यको लागि कल हो, एक अवतरण पृष्ठमा, रूपान्तरणमा!
ग्राहक तपाईंको ब्लग पोष्टमा अवतरण गर्दछ, र कार्यको लागि एक प्रासंगिक कल देख्दछ। त्यो कलको कार्यले तिनीहरूलाई अवतरण पृष्ठमा र रूपान्तरण फनेलमा लैजान्छ।
अधिकांश व्यक्तिहरू पढ्दैनन्। दोहोर्याउनुहोस्: MOST PEOPLE DON? T READ! व्हाइटस्पेस प्रभावी ढंगले प्रयोग गर्नुहोस्, छविहरूको साथ प्रतीक चिन्ह र भिडियो र अडियो थप्नुहोस्। इन्द्रियलाई फीड गर्नुहोस्: भिजुअल, श्रव्य, किनेस्टिक।
डाउनलोडहरू, घटनाक्रम, प्रश्न र उत्तरहरू, ईमेलहरू, ह्वाइटपेपर, पुरस्कार? नेतृत्व विकल्पहरू स the्कलन गर्न यी सबै विकल्पहरूको लागि डाटा फाराम आवश्यक पर्दछ। तपाईंको ब्लग नि: शुल्क छ? डाटाका लागि अरू सबै व्यापार गर्नुहोस्!
सम्भावित ल्यान्डि pages पृष्ठहरू निर्माण गर्नुहोस् जुन डेटाको न्यूनतम रकम समात्छ र त्यसले अग्रणीहरूलाई पूर्वनिर्धारण गर्दछ। यसलाई सरल बनाउनुहोस्। यो बाट एक उत्कृष्ट उदाहरण हो कम्पेन्डियम.
तपाईंको नेतृत्व कसरी आइपुगेको छ मापन गर्नुहोस्? सिन्डिकेशन, सामाजिक मिडिया, ईमेल न्यूजलेटरहरू, घटनाहरू, आदि मार्फत। यसले तपाईंलाई अधिक समय कहाँ लगानी गर्ने भनेर पत्ता लगाउन मद्दत पुर्‍याउँछ!
सन्दर्भ डोमेनहरू हेर्नुहोस्, लक्ष्य सेट गर्नुहोस्, र तपाईंको रूपान्तरण फनेलहरू निगरानी गर्नुहोस्!
म? M Douglas Karr (ट्विटर: @dgglaskarr), यदि तपाईंलाई मद्दत चाहिन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोस् Highbridge.
ओह ... र म जोड्न सक्छु कि म सुपर बाउलको सम्बन्धमा इण्डियानापोलिसबाट नयाँ अर्लिन्समा एउटा उत्कृष्ट पोकेको साथ खोलें। मेरो पूर्वानुमान चौथो क्वार्टरमा कतै गडबड भयो भनेर भन्न आवश्यक छैन र संत फ्यानहरूले मलाई यो आइतवार रातमा थाहा दिनुहोस्!
टैग: व्यवसाय को लागी ब्लगिंगएसईओ को लागी ब्लगिंगकर्पोरेट ब्लगिसंलग्नइनबाउन्ड मार्केटिङएसईओवेबट्रेंडहरू संलग्न छन्
के खुद्रा विक्रेताहरु फेसबुक मा गोल्ड हडताल गर्न सक्छन्?